Christian Eriksen Oo Ka Hadlay Wararka Ku Xidhiidhinaya Real Madrid & Juventus Iyo Heshiiskiisa Tottenham Ee Dhamaadka Ah - Cadalool.com
Christian Eriksen Oo Ka Hadlay Wararka Ku Xidhiidhinaya Real Madrid & Juventus Iyo Heshiiskiisa Tottenham Ee Dhamaadka Ah
Kubbad sameeyaha kooxda kubadda cagta Tottenham ee Christian Eriksen ayaa ka hadlay heshiiskiisa sii dhamaanaya ee uu kula jiro kooxda reer London iyo wararka suuqa ee sheegaya inuu kusii jeedo kooxda Real Madrid.
Eriksen oo ku maqan xulka qaranka dalkiisa Denmark oo uu kala qayb-gelayo ciyaaraha isreeb-reebka Euro 2020, ayaa waxa heshiiska uu kula jiro Tottenham ka hadhay hal xili ciyaareed oo kaliya, waxaana Spurs ay haysataa fursaddii ugu dambaysay ee ay qandaraas cusub kaga saxeexi lahayd xagaaga soo socda ka hor inta aanu si xor ah uga tegin dhamaadka xili ciyaareedka dambe.
27 jirkan oo la hadlay telefishank BT Sports, ayaa waxa uu tilmaamay in jaraa’idku ay ka qoraan warar badan oo aanay waxba ka jirin, markii ugu horreysay ee uu taas la kulmaana ay ahayd markii uu jiray 14 sannadood.
Waxa kale oo uu ka hadlay qaabka kooxaha Premier League ay heshiisyada ula galaan ciyaartoyga oo xaaladdiisa ka dhigaysa mid aan caadi ahayn, waxaanu yidhi: “Kooxaha Premier League waxay bilaabaan inay ciyaartoyga ka saxeexaan heshiis cusub waqti hore. Sidaas darteed, xaaladdaydu maaha caadi. Laba sannadood waa waqti badan marka laga eegayo dhinaca kubadda cagta, laakiin England waxa caadi ah inaad qorto shan ama lix sannadood oo heshiis ah. Waa sababtaas midda xaaladdaydu uga duwan tahay.”
Christian Eriksen waxa kale oo uu xusay in wararka xanta ah ee ku jira suuqu aanay wax saamayn ah ku yeelanaynin, waxaanu yidhi: “Wararka kutidhi-kuteenka ah ee ku saabsan mustaqbalkaygu saamayn iguma yeelanayaan. Ma daneeyo dhamaantood. Waa wargeys. Sidan ayay u shaqaynayeen waligood, 14 jir ayaan ahaa markii ay igu xidhiidhiyeen Chelsea. Markaa waa wargeysyo waxaa iska qoraya.”
Mar si gaar ah wax looga weydiiyey kooxaha Juventus iyo Real Madrid oo xiisaynaya, waxa uu yidhi: “Ma doonayo inaan ka hadlo taas. Wax kasta waad iska qortaan, markaa ma jirto baahi loo qabo inaan ka hadlo. Kaliya waxaan doonayaa inaan diiradda saaro xulka qaranka marka aan halkan joogo.”